भारतीय वामपन्थी बुद्धिजीवि आनन्दस्वरुप बर्मा भन्छन्- ‘नेपालमा जनयुद्ध -२ अनिबार्य देखिन्छ’-Nepali online news portal
भारतीय वामपन्थी बुद्धिजीवि आनन्दस्वरुप बर्मा भन्छन्- ‘नेपालमा जनयुद्ध -२ अनिबार्य देखिन्छ’
नेपालको माओवादी जनयुद्धलाई नजिकबाट रहेर सहयोग र समर्थन गर्नेमध्ये एक हुन् आनन्दस्वरुप बर्मा । उनी भारतीय वामपन्थी बुद्धिजीवि, पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक समेत हुन् । बर्मा केही समयअघि नेपाल आएका थिए । उनीसँग रातोखबरका लागि निर्देशक अनिल शर्मासहितको टीमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
नेपालमा बाम–गठबन्धन चर्चामा छ । यो गठबन्धनले समाजवाद र साम्यवादको कुरा पनि गरिरहेको छ । त्यस विषयमा यहाँको धारणा कस्तो होला ?
मैले वाम गठबन्धनलाई आलोचनात्मक दृष्टिले हेरेको छु । आलोचनात्मक दृष्टि किनभने यो गठबन्धनको कुनै वैचारिक आधार देखिएको छैन । किनभने एमालेले १० वर्षसम्म चलेको जनयुद्धलाई कहिल्यै समर्थन गरेन र सधैं एउटा आतङ्ककारी घटना मान्दै आयो । सामाजिक संरचनामा आमूल परिवर्तन जनयुद्धको माग थियो । त्यसमा एमाले अहिले पनि सकारात्मक छैन । यस्तो अवस्थामा के को आधारमा उनीहरूबीच सम्झौता भयो ? जनताले त्यो कुरा बुझ्न सकेका छैनन् । त्यसका रहस्यहरू खुल्दै जालान् । त्यो सम्झौताभित्र जनता र देशको हित हुने कुनै सोच छैन । यो केवल चुनावी स्वार्थप्रेरित गठजोड हो । जसको माध्यमबाट दुबैलाई पद प्राप्तीको लाभ होस् । यसैकारण गठबन्धन भएको छ । त्यसकारण म यसलाई आलोचना गर्छु । म यो गठबन्धनलाई यस अर्थमा समर्थन गर्छु कि आज दक्षिण एशियासहित पूरै विश्वमा फासीवाद उर्लिरहेको छ ।
सम्पूर्ण विश्वमा चाहे अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प, जापानमा सिङ जावे, जर्मनी, भारतमा मोदी सबैतिर फासिवाद बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा थोरै पनि फासिवाद विरोधी उदारवादी शक्तिहरू देखिन्छन् भने त्यो सकारात्मक पक्ष हो । म नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा एमाले–माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई भारतले रुचाउने छैन भन्ने कुरामा स्पष्ट छु । यद्यपि यिनीहरू भारतको स्वार्थको विरुद्ध जाँदैनन् । वाम एकता, वाम सरकार, नाम, झन्डाको कारण भारतमा पर्नसक्ने मनोवैज्ञानिक प्रभावको कारण पनि मोदी सरकार पूरै शक्तिको साथ वाम गठबन्धनको विरुद्ध लाग्नेछ । वाम गठबन्धनले दुई तिहाई ल्याएर सरकार बनाएछ भने पनि उनीहरूले साम्राज्यवादी आर्थिक नीतिलाई नै लागू गर्नेछन् । विश्वभर ‘हेर, नेपालमा कम्युनिस्ट सरकार आयो’ यस्तो प्रचार नहोस् भनेर साम्राज्यवाद चनाखो छ । त्यसकारण मैले वाम गठबन्धनलाई समर्थन गरेको छु । यस्तो अवस्थामा वास्तविक क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँदै फासिवाद विरोधी शक्तिहरूलाई पनि अघि बढ्न दिनुपर्छ ।
एमाले र माओवादी केन्द्रको बीचमा आकस्मिक रूपमा गठबन्धन कसरी भयो । त्यसको प्रेरक शक्ति के हुनसक्छ ?
मेरो मतलव भारत र चीनको भूमिका छ कि ?
नेपालको राजनीतिमा भारतको प्रभाव, हस्तक्षेप सधैं रहँदै आएको छ । लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्माणमा भारतको भूमिका प्रष्ट देखिन्छ । वाम गठबन्धन निर्माणमा भारतको हात छ कि छैन भन्ने विषयमा अझैँसम्म कुनै आधार वा तथ्य बाहिर आइसकेको छैन । मलाई के शंका लाग्छ भने चुनावमा प्रचण्डको राम्रो स्थान आयो र देउवासँग मिलेर सरकार बनाउन सक्ने अवस्था आयो भने त्यसबेला देउवा र प्रचण्ड गठबन्धन नहोला भन्ने कुनै निश्चित छ ? अहिले यो कुरा अनौठो लाग्ला तर अतितको अनुभवले त्यही कुरालाई पुष्टि गर्दछ । ओलीको सरकार ढालेर देउवाको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रचण्डले कुन हदसम्म मोदीको गुणगान गरे, हाम्रो सामु छ ।
आउने दिनमा दिल्लीको दबाबमा देउवा र प्रचण्डको सरकार नबन्ला भन्न सकिन्न । त्यस्तो भयो भने नेपाली जनता चरम निराशामा धकेलिने छन् । आम अराजकताको स्थिति पैदा हुन सक्नेछ । यो कुरा भने निश्चित रूपमा भन्न सकिन्छ कि यी दुई पार्टीको बीचमा पार्टी एकता हुन सक्दैन । यो गठबन्धन केवल चुनावी गठबन्धनमा सीमित हुनेछ ।
विप्लव नेतृत्वको नेकपाले शान्ति प्रक्रिया असफल भयो भनिरहेको छ । त्यस विषयमा यहाँको धारणा ?
तपाईले गतवर्ष नै नेपालमा जनयुद्ध– २ लेख्नु भएको थियो । के नेपालमा जनयुद्ध– २ सम्भव र आवश्यक देख्नुहुन्छ ?
विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा छ । यसको मुख्य समस्या के देख्नुहुन्छ ?
युरोप र अमेरिका आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेका छन् । त्यसको परिणाम के हुनसक्ला ?
त्यसको परिणाम जनतालाई युद्धतिर धकेल्नु, आतङ्कवादको नाममा हत्या, दमन, लुटपाट गर्नु हुनेछ । संसारमा इस्लामिक वा अन्य जति पनि आतङ्कवाद चर्चामा छन्, त्यसको मुहान संयुक्त राज्य अमेरिका हो । संसारको सबैभन्दा धेरै मुस्लिम समुदाय भएको देश इन्डोनेशियामा कम्युनिस्ट सरकार बन्नासाथ कसरी अमेरिकी संलग्नतामा बर्बरतापूर्ण दमन भयो, प्रष्ट नै छ । जहाँ कम्युनिस्ट शक्तिमा आउँछन् संसारभरिका साम्राज्यवादीहरूले स्लामवादी, कट्टरतावादीलाई संगठित गर्छन् । सेना वा गुप्तचर सञ्जाल बनाएर नियन्त्रण गर्छन् । सन् १९६५÷०६६ मा इण्डोनेशियामा त्यही गरियो । जहाँ ३० देखि ५० लाख कम्युनिस्ट मारियो । क्युबापछि ११ करोड जनसंख्या भएको इण्डोेनेशिया साम्राज्यवादको तारो बन्यो । सन् १९९६ मा विश्वको एकमात्र हिन्दुराष्ट्र नेपालमा जनयुद्ध शुरु भयो । त्यसपछि अमेरिका, बेल्जियम, फ्रान्स, बेलायत, भारत सबै जनयुद्ध दबाउन पूरै शक्तिका साथ लागे ।
नेपाली जनतामा स्वतन्त्रता, कम्युनिस्टप्रति समर्थनको शानदार परम्परा छ । दक्षिण एशियामा ६० प्रतिशत जनमत कम्युनिस्ट भएको एकमात्र देश नेपाल हो । यो जनमतलाई ध्वस्त पार्न सारा साम्राज्यवादी गैरसरकारी संस्था, गुप्तचर, बौद्धिक समूह र वित्तीय संस्था नेपालका केन्द्रीत भएका छन् । १० वर्षपछि यो तथ्य बाहिर आउला, जसरी इण्डोनेशियाको विषय आयो । त्यसैले आज नै विषयको गम्भिरताबोध गरेर कदम चाल्न आवश्यक छ ।
भाकपा (माओवादी)को विद्रोहलाई यहाँले नजिकबाट हेरिरहनु भएको छ । त्यहाँको पछिल्लो स्थिति बताइदिनुस् न ।
भाकपा (माओवादी)को नकारात्मक पक्ष वा सीमा पनि होलान् । जसको कारण अपेक्षित प्रगति भएको छैन । त्यस विषयमा यहाँको धारणा कस्तो छ ?
भारतमा बुर्जुवा लोकतन्त्रको फासिवादीकरण भैरहेको आरोप छ । त्यहाँको पछिल्लो स्थिति बताइदिनुस् न ।
यो वर्ष विश्वभरि अक्टोबर क्रान्तिको १ सय वर्ष पुगेको अवसरमा उत्सव मनाइँदैछ । तपाई त्यही शिलशिलामा काठमाडौंमा हुनुहुन्छ । विश्वका उत्पीडित, श्रमिक जनताप्रति यहाँको थप सन्देश छ कि ?
चीन र भारत मिले भने विश्वको ठूलो शक्ति हुन्छन् । अमेरिका र युरोप त्यो देख्न चाहन्नन् । यी दुई देश लडिरहनुमा नै उनीहरूको स्वार्थ मिल्छ । त्यो कुरा शासकहरूले कसरी बुझ्छन् अलग विषय भयो । हामी भारत, नेपाल र चीनका जनता एक आपसमा अन्तरक्रिया, भेटघाट, विचार आदानप्रदान गर्नुपर्छ भन्नेमा छाैं । यसले जनस्तरको सम्बन्ध सुदृढ गर्न मद्दत गर्छ । अक्टोबर क्रान्तिको शतवार्षिकी दिवसबाट नेपाल, भारतसहित विश्वभरिका जनताले प्रेरणा लिएर अझ बढी सङ्गठित बन्न सक्नुपर्छ ।
रातो खबर साप्ताहिकबाट ।